Blog Archives - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
တရုတ်မှ MIU ကျောင်းသားများသည် Fairfield Campus သို့အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကိုပို့သည်
မေလ 27, 2020 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
PhD student Yong Xu
When Chinese students heard about MIU’s need for personal protective equipment (PPE) due to the COVID-19 pandemic, several of them stepped up by donating masks. PhD student Yong Xu has sent 50 face shields, 500 KN95 masks, and four infrared thermometers from China. He has also donated 2,000 disposable surgical masks, with 500 already received and the rest on the way. Mr. Xu isabusiness owner who is completing his PhD in management at MIU’s Shanghai China program. He heard about MIU’s need for masks from Professor Scott Herriott duringaclass.
“With the deepening of my study, I have learned more about Maharishi International University,” said Mr. Xu. “I think it isamagical university, and I like its teaching characteristics of developing human wisdom and its educational concept of harmonious coexistence between man and nature. I hope the global outbreak will be over as soon as possible, and I wish Maharishi International University well, to pass on good education to more people.”
MBA student Yi (Erin) Zhang
MBA student Yi (Erin) Zhang has donated 2,000 disposable masks. Due to customs issues, she had to send the masks in 20 different shipments to 20 individuals at MIU, and they all have arrived. Both students have gone to great length to send their shipments, in spite of various customs and shipping restrictions.
Here is what Yi said about her inspiration: “Because of the severe epidemic in China, masks became scarce. At that time, MIU sent us masks from the United States, which was very touching. Furthermore, MIU has built an excellent learning platform for us, and classes have not been suspended during the epidemic. Sending these masks isatrivial expression of my gratitude.”
The surgical masks are provided to students who have off-campus doctors’ appointments, to faculty members who have to travel home after teaching here, and for students returning to campus from home. Masks have also been distributed to employees in the mailroom and food service. MIU faculty member Yunxiang Zhu also proactively purchased 200 KN95 masks for the MIU clinic in February.
Nurses Vina Miller and Sallie Morgan with the face shields and infrared thermometer received from Mr. Xu.
“These supplies are very difficult to find in the US, and we were very excited to receive them,” said Vina Miller, head of the nurses’ office at the campus clinic.
In addition, MS in computer science student Longxiang Xiao contributed 600 masks that have been distributed to students through Student Activities. Longxiang first initiatedafundraiser in March, soon after the outbreak in Wuhan, China. He not only raised $2,500, but he also purchased the masks and foundashipping agent andavolunteer group to distribute the masks in hospitals in Wuhan. Whenamonth later MIU was in need of surgical masks, he beganasecond fundraiser among his Chinese friends to purchase masks for MIU students.
Longxiang Xiao and his friends fundraising for face masks at MIU’s Argiro Center.
“The Chinese haveasaying: ‘The grace of dripping water should be reciprocated byagushing spring,’” said Longxiang. “MIU students, teachers, and staff helped Chinese hospitals before, when they were inavery bad situation, so it was time for us to help you!”
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/Yong20Xu20PhD20student20in20China20ds.jpg 1700 1920 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2020-05-27 16:11:102020-05-27 16:11:10တရုတ်မှ MIU ကျောင်းသားများသည် Fairfield Campus သို့အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကိုပို့သည်
Hlina Beyene သည် MIU အကြောင်းအားလုံးကိုနှစ်သက်သည်
မေလ 6, 2020 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
“ Maharishi အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် (အရင် Maharishi University of Management) အကြောင်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ဒီမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိပြီးလူတွေကကြိုဆိုကြတယ်။ ငါမတူကွဲပြားမှုကိုချစ်။ ငါဒြေကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းစီကိုဂရုစိုက်ဘယ်လိုချစ်ကြတယ်။ သူတို့ကလူတိုင်းကိုစိုးရိမ်ပြီးအရာရာကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်။ ငါ TM (Transcendental တရားအားထုတ်ရန်နည်း) ကိုငါချစ်တယ်။ - Hlina Beyene (အီသီယိုးပီးယားမှ)
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုလေ့လာနေသည့် Hlina Beyene ၏သူငယ်ချင်းများသည်သုတေသနနယ်ပယ်တွင်မာစတာဘွဲ့ယူရန်စီစဉ်ခဲ့ကြသည်၊ သို့သော်သူမသည်အိုင်တီလောကတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်မည့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင်မဟာဘွဲ့ရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဂူဂဲလ်ရှိ Maharishi အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
MIU ကစက်မှုလုပ်ငန်းမှာအရည်အချင်းပြည့်မီအောင်ကူညီနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး။ ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ကျောင်းပရဝုဏ်သင်တန်းများပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ငါပြင်ဆင်ထားသည်ဟုခံစားရတယ် ငါအရည်အချင်းခံစားရတယ်။ "
MIU သို့မလာမီ“ TM အကြောင်းအတိအကျမသိပေမယ့်ငါတွေးတောဆင်ခြင်ချင်သည်ကိုငါသိ၏။ ငါတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်ငါစွမ်းအင်, ငြိမ်းချမ်းရေးအချို့ရလိမ့်မယ်သိတယ်။ ငါရှာနေခဲ့သည်
“ MIU ကိုကျွန်တော်တွေ့တော့သူတို့ဟာ Transcendental Meditation ကိုအလေးအနက်ထားမယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကဒါကိုအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာသိတော့နေ့တိုင်းနှစ်ကြိမ်တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တယ်။ ဒါကငါ့အတွက်တကယ်အတွေ့အကြုံပဲ။ လှတယ်
“ MIU သင်တန်းတွေဟာပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ်မှာရှိနေတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်တစ်ခု၊ အချိန်ပြည့်ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာကြသည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီကိုတစ်လအတွင်းလေ့လာသင်ယူရန်လိုသည်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစီမံကိန်းတွေကိုသုံးရက်အတွင်းပြီးအောင်လုပ်ပြီးနေ့စဉ်တာ ၀ န်တွေကိုထမ်းရလို့ပါ။
"ကျနော်တို့ကလုပ်နေတာအားဖြင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ်ကစီမံခန့်ခွဲ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကို နံနက်တိုင်း၊ နေ့လယ်စာမစားမှီနှင့်နေ့လည်ခင်းအတန်းများပြီးဆုံးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသက်သာစေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေပြီးကျွန်ုပ်၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ ငါ TM လုပ်သည့်အခါတိုင်းငါ့ ဦး နှောက်ပို။ ပို။ စွမ်းအင်လာသည်ဟုခံစားရတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တူတယ်။ ”
“ အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသင်တန်းကိုလေ့လာရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ 8-9 လကြာသင်တန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ Career Strategies လို့ခေါ်တဲ့အထူးသင်တန်းကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် (၃) ပတ်ကြာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလုပ်ရှာဖွေရေးဌာန ၀ န်ထမ်းများကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုဖန်တီးရန်၊ အလုပ်သင် / အလုပ်အင်တာဗျူးအတွက်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။
“ သူတို့ကငါတို့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးတယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းခံရသောအခါကျွန်ုပ်သည်သူတို့ထံမှအထူးကျွမ်းကျင်မှုများကိုသာရှာဖွေနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုတွင်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်ပါ့မလားဆိုသည်ကိုသူတို့ကြည့်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ငါအင်တာဗျူးတွေမှာထူးချွန်ဖို့ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်။ သူတို့ကငါတို့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးတယ်။
“ ကျွန်တော်အလုပ်သင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရခဲ့တယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ North Carolina ရှိ America of Bank မှာ Application Developer5အဖြစ်ငှားရမ်းခံခဲ့ရတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံအလုပ်ရှာဖွေရေးစင်တာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ စုဆောင်းသူများသည်တက္ကသိုလ်သို့အမှန်တကယ်လာကြပြီးသူတို့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
“ ကျွန်တော့်မှာအထူးရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ငါတို့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့။ ငါဆော့ဖ်ဝဲ developer များဖြစ်လာရန်အမျိုးသမီးများပိုမိုအားပေးရန်လိုသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်အမျိုးသမီးများသည်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများပိုမိုထမ်းဆောင်လိုသော်လည်း၊
MIU ၏ပညာရေးကဲ့သို့သောပညာရေးသည်အမျိုးသမီးများအားခေါင်းဆောင်ရာထူးများတွင်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ပိုမိုပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားပညာပေးခြင်းသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ အီသီယိုးပီးယားမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေလုံလောက်မှုမရှိဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအားလုံးကအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်စေချင်တယ်။ သူတို့အခွင့်အလမ်းရရင်သူတို့ဘ ၀ နဲ့အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်နိုင်မယ့် MIU ကိုလာဖို့အကြံပေးလိုတယ်။ ”
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံပေါင်း ၉၃ ခုကျော်မှ software developer ၃၀၀၀ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Master of Science in Computer Science ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/DSC01076-8-ed-scaled.jpg 1600 2560 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2020-05-06 12:58:342020-05-06 13:03:51Hlina Beyene သည် MIU အကြောင်းအားလုံးကိုနှစ်သက်သည်
ဘရာဇီး MIU ကျောင်းသားမှပုံဖော်ထားသော COVID-19 အချက်အလက်
မတ်လ 31, 2020 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
ပြည့်စုံသော Real-time Display သည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
MIU ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား Edgar de Jesus Endo Junior သည် MWA (Modern Web Applications) ကိုပြီးခဲ့သည့်လကလေ့လာခဲ့သောအခါသူသည် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများ၏ online-real-time အပြန်အလှန်ပထဝီမြေပုံကိုဖန်တီးရန်အတွက်ဗဟုသုတများရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဘရာဇီးရှိမြို့အားလုံးနှင့်ပြည်နယ်များအတွက်သေဆုံးမှု။
ပါမောက္ခ Asaad Saad ၏ပြောကြားချက်အရ“ Edgar သည် MWA သင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်သူသည်၎င်း၏လွတ်လပ်သောစီမံကိန်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ဤစီမံကိန်းမှကျန်းမာရေးပညာရှင်များသည်ဘရာဇီးလ်ရှိအသက်များကိုကယ်တင်ရန်ကူညီနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ဒီအက်ပလီဂေးရှင်းကိုဖန်တီးတဲ့အတွက် Edgar ကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။
Edgar ကဲ့သို့သောဖန်တီးမှုရှိသူများသည်အလွန်တောက်ပ။ အောင်မြင်သောအနာဂတ်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံမှားသံသယမရှိပါ။
“ MWA မှာ NodeJS နဲ့ Angular တို့နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူခဲ့တယ်။ (Angular ဆိုသည်မှာဂူဂဲလ်မှ Angular Team နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများက ဦး ဆောင်သော TypeScript-based open source web application framework ဖြစ်သည်။ ) ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများနှင့်အလျင်အမြန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုသည့်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများနှင့်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရိုးရာက်ဘ်ဆိုက်များစာမျက်နှာဝန်) ။
“ COVID-19 မြေပုံရေးဆွဲခြင်းစီမံကိန်းသည်ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိလူများအဖွဲ့မှဖန်တီးခဲ့သော API (Application Programming Interface) နှင့်အလုပ်လုပ်ရန် Angular ကိုသာအသုံးပြုသည်။Brasil.IO)။ ဘရာဇီးလ်တွင် (COVID-19 ပြန့်ပွားခြင်းအပါအဝင်) အကြောင်းအရာများစွာနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုနေ့တိုင်း update လုပ်ရန်၎င်းတို့တွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။ အချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်သောစက်ဖတ်နိုင်သောပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
“ ပထမဆုံးအသုံးပြုနိုင်သောမြေပုံစီမံကိန်းကိုထုတ်လွှင့်ရန် (Github ကို အသုံးပြု၍) ငါးရက်ကြာခဲ့သည်။ Real-time အပြန်အလှန်မြေပုံကိုဘရာဇီးရှိလူတိုင်းအတွက်သူတို့၏စမတ်ဖုန်းများ (သို့) ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အင်တာနက်သုံးခွင့်ရှိသူများကိုပြုလုပ်သည်။ ဘရာဇီးလ်ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အကျိုးကျေးဇူးအတွက်ဒီစီမံကိန်းကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖန်တီးရတာကျွန်တော်ကျေနပ်မိပါတယ်။
“ ဒီစီမံကိန်းကမတူကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်တာကမြေပုံထဲမှာအချက်အလက်တွေကိုဂရပ်များဖြင့်တင်ပြခြင်းနှင့် API ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမွမ်းမံခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤ API ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ပထမဆုံးသော application ဖြစ်သည်။ ”
Edgar သည်ဤစီမံကိန်းအားဘရာဇီးလ်ပြည်သူများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အတွက် ၀ မ်းသာသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အချိန်နှင့်အမျှအတည်ပြုဖြစ်ပွားမှုနှင့်သေဆုံးမှု၏ဇယား (ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိုအပ်သည်)
တစ် ဦး ချင်းစီမြို့ကြီးများအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ချဲ့နိုင်စွမ်း
မတ်လ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ အတွက်Cearáပြည်နယ်တွင်းနေ့စဉ်အချက်အလက်များကိုနမူနာယူပါ။
မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ အထိဆောပိုလိုမြို့အတွက်နမူနာစုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များ။
Edgar သည်ဘရာဇီး၊ SP၊ Itapeva မှဖြစ်သည်။ သူ၏ပန်းတိုင်များတွင်အသုံးဝင်သော software ထုတ်ကုန်များကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ယူဆောင်လာခြင်းနှင့်သူအလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားများပါဝင်သည်။
သူကဆက်ပြောသည် - MIU နှင့် Computer Professionals Master's Program သည်ကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောအမြင်များကိုတိုးတက်စေခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အိပ်မက်မက်ခဲ့သောအိပ်မက်များအားခွင့်ပြုလိုက်သည်။
အခြား software developer များအတွက်အကြံဥာဏ်
ဘရာဇီးနှင့်အခြားဆော့ဖ်ဝဲရေးသူများအတွက် MIU ၌လေ့လာရန်အခွင့်အရေးကိုသာရယူပါ။ ဆင်ခြေမပေးနဲ့၊ အဲဒါတကယ်တန်တယ်။
"ဒီ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကို (MIU ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများထံနေ့စဉ်နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည်) စိတ်ဖိစီးမှုကိုအကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်မိသားစုသည်ဤမြေပုံထုတ်ခြင်းအောင်မြင်မှုအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် MIU ရှိကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင်လေ့လာရန်ရွေးချယ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/City20Sao20Paulo20accumulated20graph203-27-2020.jpg 527 595 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2020-03-31 16:29:512020-04-01 11:32:52ဘရာဇီး MIU ကျောင်းသားမှပုံဖော်ထားသော COVID-19 အချက်အလက်
လတ်တလော ComPro ဘွဲ့ရများထံမှမှတ်ချက်များ
မတ်လ 23, 2020 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
“ ဒီအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာဘဝပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
MIU ရှိကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင်မဟာဘွဲ့ရရှိခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပြီး၊ MIU မှအရာအားလုံးကကျွန်ုပ်ကိုအိမ်၌ခံစားစေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်သခင်ကိုအဲဒီမှာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒီနေရာမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့၊ ကြင်နာတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းများစွာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ MIU နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လှပတဲ့တိုင်းပြည်ကနေစခဲ့တာပါ။ အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။"
“ MIU ကကျွန်တော့်ကိုဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နည်းလမ်းများစွာနဲ့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါကသိစိတ်ကိုအခြေခံတဲ့တက္ကသိုလ်ကနေပညာရေးရဖို့အရမ်းတွန့်ဆုတ်သော်လည်း။ ငါ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုကိုငါလုပ်ပြီထင်တယ် ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆန္ဒများကိုကျွန်ုပ်ပြည့်စုံစေရုံသာမကကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ရေးဘက်ကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၌ပျောက်ဆုံးနေသောအစိတ်အပိုင်းကိုလည်းပြည့်စုံစေပါသည်။ ”
“ MIU ရဲ့ MSCS အစီအစဉ်ကကျွန်တော့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကျေနပ်တယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေပြီးကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအခြားလုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များစွာအတွက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆရာ ၀ န်များ၊ ညှိနှိုင်းရေးမှူးများ၊ နည်းပြများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ အထောက်အကူပြု၊ ဖော်ရွေ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးဘွဲ့ယူသည်အထိကျောင်းအပ်နှံခြင်းမှဂရုစိုက်သောအခြားဝန်ထမ်းများအားကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ MSCS အစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့သောဝန်ထမ်းတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေး၊ အောင်မြင်မှုနှင့်မိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
“ MIU နဲ့ဆရာ ၀ န်တွေကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကအလွန်ကောင်းပါတယ်။
“ MIU မှာကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒီသင်တန်းတွေကကျွန်တော့်အလုပ်အတွက်အခုပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီ။ ဆရာများသည်အလွန်တတ်ကျွမ်းသူများဖြစ်သည်။ Transcendental တှေးတောဆငျခွ ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုအတွက်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ ရရှိတဲ့ဗဟုသုတကကျွန်တော့်ကိုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်ကောင်းရှိအောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ”
"ငါ MIU နှင့်အတူတကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ လူများစွာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ MIU ကကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ အချို့သောဒြေတွေကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ရုံးခန်းကမယုံနိုင်လောက်အောင်လုပ်တယ်။ ”
“ ပရိုဂရမ်ကသင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကမ္ဘာတွင်ရှင်သန်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်သင်တန်းများကိုပေးသည်။ IT သင်တန်းများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည့်အတွေ့အကြုံရှိပါမောက္ခများကသင်တန်းများကိုသင်ကြားသည်။ Transcendental Meditation (TM) ကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်အလေ့အကျင့်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဘဝကိုတိုးတက်စေရန်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ MSCS အစီအစဉ်ရဲ့အလုံးစုံအတွေ့အကြုံကအံ့သြစရာပါပဲ။
လူမျိုးနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမခံရဘဲကြီးစွာသောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒုတိယအိမ်နှင့်မိသားစုဖြစ်သည့်အတွက် MIU အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အလားအလာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ရည်ရွယ်သည့် MIU ရှိဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါသည်။
"ဒီအစီအစဉ်ကယ့်ကိုကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကို Transcendental တရားအားထုတ်ရန်သင်ကြားပေးဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ”
အမေရိကန်မှာလာပြီးမာစတာဘွဲ့ပြီးအောင်လုပ်ဖို့အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ အခုနောက်ဆုံး Maharishi International University မှကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုပြီးဆုံးသွားပြီ။ ”
“ ဒီမှာ MIU မှာပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုမြှင့်တင်ဖို့အရာများစွာသင်ယူဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ စိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့နဲ့ Transcendental တရားအားထုတ်ရန်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဉာဏ်စွမ်း၊ ငြိမ်သက်မှုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်မှုတို့ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းသင်ယူခဲ့တယ်။ ”
“ Maharishi နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ကျနော့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ခရီးဟာအရမ်းမှန်တယ်။ ဤအတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကြီးမားဆုံးသောကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ MIU ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုချင်ပါသည်။ MIU ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
“ MIU မှာရောက်ရတာအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများသည်အလွန်ကောင်းသည်။
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/eIMG_9505.jpg 1087 1920 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2020-03-23 15:44:362020-03-23 16:31:47လတ်တလော ComPro ဘွဲ့ရများထံမှမှတ်ချက်များ
ယူဂန်ဒါညီအစ်ကိုငါးယောက်သည် MIU အစီအစဉ်များကိုထောက်ခံသည်
ဇန်နဝါရီလ 21, 2020 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
Edwin Bwambale ယူဂန္ဓာအနောက်ပိုင်းရှိ Bukonzo အနွယ်ဝင်များဖြစ်ပြီးသူ၏ညီလေးယောက်မှာသူ၏ပညာတတ်သူများဖြစ်သည်။ သူသည်ယောက်ျားလေးငါးယောက်၏ဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်သည်။
ညီအစ်ကိုငါးယောက် (အထက်မှညာညာသို့) အမည်ပေးထားသည်။ Idine Membere၊ Edwin Bwambale, Godwin Tusime, Harrison Thembo နှင့် Cleave Masereka ။ (သားတစ် ဦး စီတွင်မတူညီသောနာမည်များရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်မိသားစုအတွင်းမွေးဖွားမှုအစဉ်အလာကို အခြေခံ၍ မိသားစုအမည်များကိုဖော်ပြထားသည်။ )
“ MIU အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်သံသယဝင်မိတယ်။ ငါအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုမယုံနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့်ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သင်တန်းကိုတက်ခဲ့တယ် အဲ့ဒါကငါအစီအစဉ်ကတကယ့်ကိုအမှန်ပဲဆိုတာအတည်ပြုလိုက်တာပဲ!”
ထို့ကြောင့်သူသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်အိုင်ဗားရားပြည်နယ်၊ ဖဲရ်ဖီးလ်ရှိ Maharishi International University တွင် Computer Professionals Master's Degree Program (“ ComPro”) တွင်လျှောက်ထားပြီးစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။
“ ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ လက်တွေ့ကျတယ်၊ လက်တွေ့ကျတယ်၊ ဒါကလခပေးတဲ့အလုပ်သင်မှာငါ့ကိုကူညီခဲ့တယ်။ ”
အက်ဒဝင်သည်သူ၏ MIU အတွေ့အကြုံများအကြောင်းပြောပြသောအခါသူ၏မိဘများသည်အလွန်စိတ်စွဲမှတ်သွားပြီးသူတို့၏သားငါးယောက်လုံးသည် MIU သို့တက်သင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ထိပ်ဆုံးရှိအထူးပြုဗီဒီယိုတွင် ပင်မစာမျက်နှာအက်ဒဝင်မှတ်ချက်ချသည်
“ ဒီတက္ကသိုလ်ဟာအိုင်အိုဝါပြည်နယ်၊ ဖဲရ်ဖီးလ်ဒ်မြို့ငယ်လေးမှာဖြစ်တယ်။ မြို့ကလူတွေကကြီးတယ်။ လူတွေကနေရာတိုင်းမှာပြုံးတယ်။ သင်ဟာမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသော်လည်းသင့်အိမ်၌သင့်ကိုခံစားစေသည်။ 🙂
Harrison, Cleave နှင့် Edwin တို့မိသားစုများနှင့်အတူ
“ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကအရမ်းကိုချစ်ခင်ကြပြီးကျွန်မတို့ကိုတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့နဲ့အောင်မြင်မှုဆီကို ဦး တည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်မှုတ်သွင်းခဲ့တယ်။ သူတို့ကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်သူတို့ကရည်မှန်းချက်တွေကိုကြီးထွားစေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတသမတ်တည်းစကားပြောပြီးကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ကျွန်မတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်မိသားစုကိုချစ်ဖို့အတွက်စံနမူနာပြခဲ့ကြလို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးတကယ်ချစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်။
အက်ဒဝင်ဆက်ပြောသည် “ ကျနော့်မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ MIU ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသံသယမရှိကြပါဘူး။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုလေးယောက်နှင့်အခြားသူငယ်ချင်းများအားလုံးသည်မဟာရပ်ရှီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွင်သူတို့၏မဟာဘွဲ့အတွက်လေ့လာရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ”
“ MIU မှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဟာကျွန်တော့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပညာရေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစွမ်းဆောင်ရည်များပေးနိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ MIU အခွင့်အလမ်းနှင့်သင်ရရှိနိုင်သောအရာသည်သင်၏စိတ်ကူးဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မြင်ဖူးသမျှနှင့်ကြားဖူးသမျှတို့တွင်အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။ အသက်ရှင်ပါ MIU! "
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ အ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
Masereka မှီဝဲ (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ရ - Apple တွင်အလုပ်လုပ်သည်):
“ ကျွန်တော့်အစ်ကိုအက်ဒဝင်ကဗီဇာရပြီး ၂၀၁၆၊ သြဂုတ်လမှာရောက်တဲ့အထိမဟာရပ်ရှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ရဲ့စိတ်ကူးကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူး။ ဒါကကျွန်မရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာမှာငါပါ ၀ င်ခဲ့တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
"လက်ရှိ Edwin မှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft ကဘင်ဂျမင် (ယူဂန်ဒါမှသူငယ်ချင်း) တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Facebook က ငါရောက်နေပြီ Apple။ (ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီသုံးခု - ငါတို့အားလုံးသည်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများဖြစ်သည်။ ) ဤအရာသည် MIU မှကျောင်းသားများအားပေးသော unsung အလားအလာကိုရှင်းပြသည်။ ၎င်းကိုငါသေချာပြောနိုင်သည် ComPro သည်မာစတာ၏အစီအစဉ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောပေါင်းစပ်သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ MIU မှာငါတို့လေ့လာခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအလုပ်ကောင်းကောင်းရပြီးပျော်ရွှင်စွာနေကြတယ်။ မည်သူမဆို MIU သို့လာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Godwin Tusime (လောလောဆယ်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွင်အိုင်တီပညာဘွဲ့ကိုရရှိပြီးသူ MIU Computer Professional Programs တွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ ):
“ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုကျွန်တော်စိတ် ၀ င်စားပါတယ်။ ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်သူ၊ ယခု MIU ကိုကျွန်ုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာလေးစားမိပြီးကွန်ပြူတာပညာရှင်အစီအစဉ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ညီများ (Cleave and Edwin) ပြောင်းလဲသွားသည်။ (Harrison သည် Accounting MBA ကိုလုပ်နေသည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်းမင်းစွမ်းရည်တိုးတက်ရန်နေ့တိုင်းကြိုးစား။ မကြာမီ MIU တွင်ပါဝင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ဘဝဟာဘယ်တော့မှထပ်တူထပ်မျှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာတယ်။ ”
Harrison Thembo (စာရင်းကိုင် MBA အလုပ်သင်ကျောင်းသား - Silicon Valley Financial Group တွင်စာရင်းကိုင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်း) -
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ဖို့နဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးမှာယှဉ်ပြိုင်ဖို့အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ အောင်မြင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ Maharishi အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကစာရင်းကိုင်ဘွဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သောပလက်ဖောင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
“ ယခုတွင်ငါသည်ဆီလီကွန်တောင်ကြားရှိအကောင်းဆုံးစာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဝန်ထမ်းစာရင်းကိုင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ MIU ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဤအသီးအပွင့်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်မတွေးမိခဲ့ပါ။ ဤကျောင်းမှပေးအပ်သည့်အသိစိတ်အခြေပြုပညာရေးအတွက်ကျွန်ုပ်အစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အပြင်ကအိပ်မက်ဆိုးတွေအတွက်ဒီနေရာဟာသွားရမယ့်နေရာပါ။ ”
Idine အသင်းဝင် (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လတွင်စာရင်းကိုင် MBA တွင်စာရင်းသွင်းရန်စီစဉ်ထားသည်):
“ ကျွန်တော်ဟာ MIU ကနေ MBA ကိုလုပ်ချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဦး နှောက်ထဲကတချို့ရဲ့မာစတာတွေကိုတက်ချင်တယ်။ MIU ကဒီပလက်ဖောင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် MIU မှပညာရေးချေးငွေအစီအစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှလူများအားအမေရိကန်ပညာရေးကိုရရှိရန်ခက်ခဲသောအလုပ်ကိုပိုမိုတတ်နိုင်။ ရနိုင်သည်
“ ဒီအစီအစဉ်အတွက် MIU ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့အက်ဒ်ဝင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် MIU တွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရှိပြီးသားဗဟုသုတဘဏ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကျွန်ုပ်မစောင့်နိုင်ပါ။ စကားမစပ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ယူကေရှိ Chartered Certified Accounts (ACCA) မှအရည်အချင်းပြည့်မီပြီး US မှာလက်မှတ်ရစာရင်းကိုင်ဖြစ်ချင်တယ်”
ယူဂန်ဒါမှ MIU မှမှတ်ချက် -
Benjamin Wogisha (ညီအစ်ကို၏သူငယ်ချင်း) (ကွန်ပြူတာသိပ္ပံဘွဲ့လွန် MS - Facebook တွင်အလုပ်လုပ်သော Software Engineer) -
“ ကျွန်တော်ထပ်မံလေ့လာချင်ခဲ့ပေမယ့်သင့်တော်တဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုရှာမရခဲ့ပါဘူး။ အခြားတက္ကသိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက MIU ကိုလျှောက်ထားခြင်းသည်မြန်ဆန်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၎င်းတို့သည်တုန့်ပြန်မှုအလွန်များပြီးအထောက်အကူလည်းဖြစ်စေသည်။ MIU ကကမ်းလှမ်းသည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ် အဲဒါကငါ့ကိုလစဉ်သင်တန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ခွင့်ပေးလို့ပဲ။
“ Maharishi အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှသင်ကြားပို့ချပေးသောသင်တန်းများသည်ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းလုပ်လိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗိသုကာနှင့်အညီဖြစ်သည်။ ငါကနေရာတိုင်းမှာတော်တော်များများရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးနိယာမတွေဆီကနေသင်ယူဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့မြင်ခဲ့တယ်။
“ MIU မှာပညာသင်နေတဲ့အချိန်မှာယူအက်စ်မှာအလုပ်သင်နေစဉ်မှာအကြီးစားစနစ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်၊ ယူအက်စ်အေတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တွေးမိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုသော့ခတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်သိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမေရိက၌နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများရှိသည်။
လုပ်နေတာ၏တန်ဖိုး Transcendental Meditation® technique ကို လေ့လာနေစဉ်နှင့်ယခုအလုပ်လုပ်နေစဉ်:
ဘင်ဂျမင်ကထပ်မံပြောကြားသည် -“ တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့တက်ခဲ့တဲ့ Transcendental တရားအားထုတ်ရန်အုပ်စုကိုတက်ဖို့အမြဲတမ်းသေချာခဲ့တယ်။ တကယ့်ကိုကောင်းပြီးထူးခြားသည့်အုပ်စုတစ်ခုတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုရှိသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်ကိုစတင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်စိတ်အေးအေး ထား၍ ကျွန်ုပ်လမ်းပေါ်ရှိမည်သည့်အရာများကိုမဆိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားသည်ဟုခံစားမိသည်။
“ ဒီသင်တန်းတွေက TM ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့နားလည်မှုရှိအောင်ကူညီပေးခဲ့ပြီး၎င်းကိုမှန်မှန်လေ့ကျင့်ခြင်းမှ၊ ငါ TM ကိုမှန်ကန်သောနည်းနဲ့ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သံသယများကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းမှဘယ်လိုပိုရနိုင်မလဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်နှင့်ပင် TM ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၂၀ သာလေ့ကျင့်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏တွေးတောဆင်ခြင်မှုပြီးနောက်အာရုံစိုက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ”
“ သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကိုမြှင့်တင်ချင်တဲ့သူတိုင်းအတွက် MIU ကမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ အဆိုပါသင်တန်းများဒါကောင်းစွာစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ငါကျောင်းဝင်းကိုယူသောသင်တန်းတစ်ခုချင်းစီကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ သင်တန်းတွေကသီအိုရီနဲ့လက်တွေ့အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးခဲ့တယ်။ လက်တွေ့ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်သဘောတရားများစွာသည်ရှင်းလင်းလာပြီးနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ခဲ့သောအလွန်ခိုင်မာသောအခြေခံကိုပေးသည်။ ကထိကများသည်ကျောင်းသားများအားအမြဲတမ်းကူညီရန်ရှိနေပြီး MIU တွင်ကျောင်းသားများစွာရှိပြီးသင်အားအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အောင်မြင်မှုအတွက် MIU တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။"
“ ငါ့ညီ (Denis Kisina) မကြာသေးမီကအဖြစ်ကောင်းစွာတက္ကသိုလ်မကြာသေးမီကဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ တစ်လသာကြာပြီးနောက်သူကဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ သူအစီအစဉ်ကိုအဆုံး၌သူမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသာစိတ်ကူးနိုင်သည်။ မဟာရပ်ရှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်သည်သူအာရုံစူးစိုက်လေ့လာရန်လိုအပ်သည့်အကောင်းဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ”
ယူဂန္ဓာကျောင်းသားများအားအမေရိကန်နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏ MIU မိသားစုသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ကီလိုမီတာ ၁၃၀၀၀ ဝေးသောခရီးကိုပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာသည့်ကျောင်းသားအဖွဲ့တွင်သင်ရှိနေခြင်းသည် ၀ မ်းသာပါသည်။
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/5-brothers-in-suits-e1579632167616.png 336 600 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2020-01-21 14:06:382020-01-21 14:11:01ယူဂန်ဒါညီအစ်ကိုငါးယောက်သည် MIU အစီအစဉ်များကိုထောက်ခံသည်
MIU ComPro မိသားစုသို့ဝင်ပါ
ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
ComPro သတင်းများ: ဒီဇင်ဘာလ 2019
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာသိပ္ပံပရိုဂရမ်တွင်သင်စာရင်းသွင်းသည့်အခါသင်ဟာကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူပရိုဂရမ် ၄၀၀၀ ခန့်ရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မည် (ComPro)SMMaharishi International University မှကျောင်းသားများ၊ ဘွဲ့များ၊ ဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ။
မတူကွဲပြားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပကြသည် - ကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ် MSCS စာရင်းလေးခုအနက်တစ်ခုစီသည်နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်မှအတွေ့အကြုံရှိသော software ပညာရှင်များပါ ၀ င်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်ကိုကျောင်းဝင်းတွင်တွေ့ရသည်။
Godwin A. (ဂါနာမှ) - MIU သည်လူတိုင်းကိုဂရုစိုက်သည့်မိသားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်လူတိုင်းလိုက်ဖက်သည့်အလွန်ကျန်းမာသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးကြသည်။ မည်သူမဆိုလိုအပ်လျှင်ကူညီရန်တစ်စုံတစ်ယောက်အမြဲရှိသည်။ ”
Sahar A. (ယီမင်မှ) -“ ကျွန်ုပ်သည်ဤငြိမ်းချမ်းသော (MIU) ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကို။ Fairfield တွင်နေထိုင်သောမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများကကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများအားလေးစားမှုရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ သူတို့ကငါ့ကိုသူတို့ထဲကတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံတယ်။
Sadis C. (တူနီးရှားမှ) -“ MIU ကိုထူးခြားစေခြင်းမှာ၎င်းသည်လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျောင်းသားများကိုနားထောင်သောအလွန်ကောင်းသောဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများအားတွေ့ဆုံနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ Ford Motor ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရခဲ့တယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော၊ စိတ်ဖိစီးမှုနိမ့်ကျခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောနေထိုင်မှုပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျွန်ုပ်တို့လှပသောအမေရိကား၏ ၃၆၅ campကကျယ်ဝန်းသည့်သဘာဝကျောင်းဝင်းအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုလာရောက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်မိနစ်ကြာဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ၊ “ ComPro ၏မိသားစုများ -
Cleave နှင့် Benjamin တို့သည်ယူဂန်ဒါသူငယ်ချင်းများနှင့် MIU တွင်ဘွဲ့ရသည်
မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ComPro မိသားစုသို့ဆက်သွယ်ပါ?
မဟာရပ်ရှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် (ယခင် Maharishi စီမံခန့်ခွဲမှုတက္ကသိုလ်) ကို ၁၉၇၁ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းမှအသိအမှတ်ပြုသည် ပိုမိုမြင့်မားသောသင်ယူကော်မရှင်.
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/group_oct2017_waiving_edit_1000.jpg 590 1000 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2020-01-09 23:04:082020-01-09 23:04:08MIU ComPro မိသားစုသို့ဝင်ပါ
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင် MS ။ 2nd US တွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်
အောက်တိုဘာလ 25, 2019 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းဆင်းပွဲ, သတင်း /by cre8or
- အစိုးရ၏စာရင်းအင်းများကအစီအစဉ်အောင်မြင်ကြောင်းအတည်ပြုသည် -
ယူအက်စ်အေပညာရေးစာရင်းအင်းစင်တာမှထုတ်ပြန်သောအချက်အလက်များအရ 2-2017 ပညာသင်နှစ်တွင်ချီးမြှင့်သည့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာဘွဲ့အတွက် Maharishi တက္ကသိုလ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အမေရိကန်အလယ်တန်းအဆင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင် #18 အထိတစ်နိုင်ငံလုံးမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒေတာရရှိနိုင်သည့်အဘို့အလတ်တလောတစ်နှစ်) ။
အဆိုပါအချက်အလက်များကိုအမေရိကန်ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များမှနှစ်စဉ်အစိုးရသို့နှစ်စဉ်တင်သွင်းသည့်ပေါင်းစည်းထားသည့် Postsecondary ပညာရေးအချက်အလက်စနစ် (IPEDS) အစီရင်ခံစာမှရရှိသည်။
1 နံပါတ်ကိုကိုင်ထားသည်မှာတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး 872 ဘွဲ့ရများဖြစ်သည်။ MUM ၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့တွင် MS အရေအတွက်သည် 389 ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မစ်ဆူရီတက္ကသိုလ်၊ 352၊ နယူးယောက်ရှိကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် (343) နှင့် Springfield မှအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ် (338) တို့နောက်မှလိုက်ကြသည်။ 230 အဖွဲ့အစည်းများသည် 2017-18 တွင် CS Master ဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ 2016-17 မှာ MUM ဟာဒီအမျိုးအစားမှာ #5 ဖြစ်တယ်။
ကိုးကားစရာ: ပညာရေးစာရင်းအင်းအတွက်အမျိုးသားစင်တာ၊ IPEDS အချက်အလက်.
3000 MSCS 92 + Nations မှ 1996 ကတည်းကဘွဲ့ရခဲ့သည်
လက်ရှိပညာသင်နှစ်အကုန်တွင် 3000 နိုင်ငံများမှ 100 ကျောင်းသားများသည် MSCS ဒီဂရီဖြင့် Maharishi University of Management မှဘွဲ့ရလိမ့်မည်။ နှစ်စဉ်ကျောင်းအပ်နှံမှုလေးခု ရှိ၍ ကျောင်းသားအသစ်သည်လက်ရှိပညာသင်နှစ်အတွင်း 400 သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာသိပ္ပံပညာတွင်တတ်နိုင်။ တန်ဖိုးထားလေးစားရသော MS သည်အတွေ့အကြုံရှိဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲသူများအတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်သက်ဆိုင်သောနယ်ပယ်တွင်ဘွဲ့ရရှိထားသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အခကြေးငွေပေးသောသင်တန်းနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်သော software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဝဘ် application များနှင့်ဗိသုကာပညာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရအချက်အလက်သိပ္ပံနယ်ပယ်သုံးခုကိုအလေးထားပါသည်။
ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်၏ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးနှင့်အားသာချက်မှာကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားလုံးသည်သူတို့၏သင်ယူမှုစွမ်းရည်၊ ဘဝအရည်အသွေး၊ စိတ်ဖိစီးမှုမှသက်သာမှုနှင့်ပညာရေးနှင့်အလုပ်များတိုးတက်စေရန်ရိုးရှင်းသော၊ စနစ်တကျနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအတည်ပြုထားသော Transcendental Meditation®နည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်။ ပိုမိုသိရှိရန်.
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/eIMG_9010-e1572036876530.jpg 792 1200 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2019-10-25 16:24:362019-12-03 16:36:25ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင် MS ။ 2nd US တွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်
သြဂုတ်လ 6, 2019 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by cre8or
mum ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားတစ်ဦး Inspiration ပါ!
လိန်း Sun က ( "Susie") ပြောပြရန်အံ့သြစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ သူမသည်ကျေးလက်ဒေသတရုတ်အတွက်သေးငယ်တဲ့လယ်ယာရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ယနေ့သူမနယူးယောက်စီးတီးရှိတစ်ဦးက Google ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဘယ်လိုလုပျခဲ့သလဲ
ဟူနန်ပြည်နယ်ကလိန်းရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအလယ်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်မိန်းကလေးအထက်တန်းကျောင်း သွား. , လယ်ယာကိုကူညီပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုများရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်ဘူး။ တကယ်တော့သူမဟာမိသားစုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့မိသားစုရဲ့နယ်ပယ်များတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့အသက်အရွယ် 13 မှာကျောင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသည်။
ဒါပေမဲ့လယ်ယာအလုပ်ခက်ခဲ့လိန်းမပျော်လုပ်, ဒါကြောင့်သူမရဲ့ဖခင်တောင်းဆိုနေတာစောင့်ရှောက်လျှင်, သူနောက်ဆုံးတော့ကျောင်းကသူမကိုပြန်လာပါစေသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ သူမ၏ 11 ရွာမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ, လိန်း Sun ကအထက်တန်းကျောင်းအပြီးသတ်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဤပညာရေးသူမ၏ကောလိပ်ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး, ဒါကြောင့်သူမရှန်ကျန်းအတွက်စက်ရုံတစ်ရုံအလုပျသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမလအနည်းငယ်အကြာတွင်စက်ရုံနုတ်ထွက်နှင့်ဤသူမ၏တစ်ဦးထက်ပိုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေတဲ့ကွန်ပျူတာလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ဒါအလုပ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်, ပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျေးလက်ဟူနန်ပြည်နယ်ရှိရွာ၌မိသားစုဝင်များနှင့်အတူလိန်း Sun က။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့က MS ပရိုဂရမ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးဆက်လက်လေ့လာပါ
စက်တင်ဘာလ 2011 မှာတော့လိန်းရှန်ကျန်းအတွက်အွန်လိုင်းမှလုပ်ခလစာစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲသူမ၏ပထမဦးဆုံး software ကိုအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရခဲ့တယ်။ ဒါကခဏကြီးပေမယ့်သူမပါသေးအခြားသူများကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်အသိပညာနှင့်အထောက်အထားများရှိခဲ့ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့မြို့တွင်ပိုမိုအောင်မြင်သောခံစားရချင်တယ်။
အလုပ်ဆက်လက်နေစဉ်မကြာသေးမီကအင်တာဗျူးမှာတော့လိန်းသူမ၏အခြေခံလှုံ့ဆော်မှုအမြဲရန်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်း South China Morning Post ကပြောသည် "ရုံအသစ်သောအရာ step-by-step, နေ့-by-နေ့ကသင်ယူခြင်းကိုစောင့်ရှောက်။ " ဒါကြောင့်, သူမအင်္ဂလိပ်လေ့လာ ရှန်ကျန်းတက္ကသိုလ်နှင့်အတူအကွာအဝေးပညာရေးဘွဲ့အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်း။ စွမ်းအင်အမြောက်အမြားနှင့်အတူအားကစားဖြစ်ခြင်း, သူမလည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေပိုပြီးလောကီနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူအခြားသူများထံမှအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနေတဲ့လမ်းအတိုင်းအဆုံးစွန်ဖရီးစ်ဘီးကစားခြင်းစတင်ခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနောက်ခံနှင့်အတူလူများတို့အားအဆိုပါထိတွေ့ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုကြည့်ရှုရန်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူလိန်းနှိုးဆွ။ 2016 အတွက်တရုတ်အလုပ်-မုဆိုးက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်နေစဉ်သူမတစ်ဦးအဘို့ကြော်ငြာသတိပြုမိ အမေရိကန်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမာစတာဘွဲ့အစီအစဉ်ကို ကြောင်းသူမ၏မှပြီးပြည့်စုံသောကြည့်ရှု: အနိမ့်ကနဦးကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုအသိအမှတ်ပြုပညာရေးဘွဲ့အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပေးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်သင်ရဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူ။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီလေ့လာမှုများအတွက်အလုပ်သင်ကာလအတွင်းအကွာအဝေးပညာရေးမှတဆင့်ဆက်လက်လိမ့်မယ်။
လိန်းလျှောက်ထားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သို့လက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည် စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ်ခန့် 230 အနောက်တောင်ဘက်မိုင်ချီကာဂိုမှာတည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါတန်ဖိုးရှိသောအလုပ်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်မြောက်မြားစွာအင်တာဗျူးများအပါအဝင်ကျောင်းဝင်းအပေါ်လေ့လာနေကိုးလပြီးနောက်, Sun ကကို Google ရောင်းချသူ, EPAM စနစ်များနှင့်အတူတစ်ဦးဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်အနေအထားကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်။
ဤတွင်လိန်း Sun ကအောက်တိုဘာလ 2017 အတွက် mum ရောက်ရှိလာသောပြီးနောက်ပါပဲ။
Google မှာ Paid ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်သင်
Google ရဲ့မန်ဟက်တန်ဌာနချုပ်မှာစာချုပ်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်, လိန်း Ph.D ဘွဲ့ကိုနှင့်အတူထိပ်တန်းအမေရိကန်တက္ကသိုလ်များ-အချို့ထံမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရှိသည်ဖို့ကံကောင်းခံစားရ ဒီဂရီ။ "ကျွန်မဒီအားလုံးထိုက်ဘူးနဲ့တူသို့သော်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှ, ငါ့လိုဆကျဆံ"သူမသည် South China Morning Post ကနဲ့မကြာသေးမီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒါကအမရေိအကြောင်းကိုငါသဘောကျတယ်အရာဟူမူကား, သူတို့သင်ဘယ်ကလာထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်ဘယ်အရာကိုတန်ဖိုးထား။ "
mum မှာသုံးစွဲအခြိနျနှငျ့ ပတျသကျ. သူမကအထူးပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်, ကျောင်းသားများနှင့်တက္ကသိုလ်လူဦးရေရဲ့မတူကွဲပြားမှု, ဒီမှာရာ၌များစွာသောအဆွေခင်ပွန်းဖိုးထား။ သူမသည် "ငါသည်ဖဲရ်ဖီးလ်အတွက် (mum မှာ) ကုန်တိုင်းအခိုက်ကြိုက်တယ်။ " ဖြည့်စွက်
သူမရဲ့အကြံပေးပါမောက္ခ Mei လီ, Susie အမြဲအားလုံးသူမ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့နှင့်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ် "လို့ပြောပါတယ်။ သူမသည်အကောင်းတစ်ဦးကျောင်းသား, လူတိုင်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အားကစားအပါအဝင်နေရာအများအပြားအတွက်အတော်လေးထူးချွန်ခဲ့ပါတယ်။ "
အဆုံးစွန်ဖရီးစ်ဘီးအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူလိန်း Sun က။
ဒီဇင်ဘာလ 2019 အတွက်သူမ၏သခင်၏ဒီဂရီပြီးသွားချိန်လိန်းသူမ၏မိဘများအမေရိကသို့သွားရောက်နှင့်ငါတို့ကျောင်းဝင်းအပေါ်သူမ၏ဘွဲ့လွန်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါလာကြပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဟာတရုတ်ကသူတို့ရဲ့ဇာတိမြို့ထားခဲ့ဖို့သူမအမေများအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါလိမ့်မယ်!
လိန်း Sun ၏နောက်တစ်နေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက်အိမျကို Google ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် "ဒါဟာလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်သင်၏အသက်တာသင်တို့၏သက်သာဇုန်ရဲ့အဆုံးမှာစတင်ခဲ့သည်။ " သူကပြောပါတယ်
လိန်း Sun ၏ထူးခြားပြောင်မြောက်ဘဝအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုဖို့, ဒီဖတ်ပါ ဆောင်းပါး အဆိုပါ South China Morning Post က၌။
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/Sun-Ling-at-Google-from-Sun-Ling.png 800 1200 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2019-08-06 21:09:152019-12-29 21:45:52Google ကဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကျေးလက်ဒေသတရုတ်လယ်ယာအပေါ်ကြီးပြင်း
mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ကျောင်းဆင်းများ၏စံချိန်အရေအတွက်
ဇူလိုင်လ 12, 2019 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းဆင်းပွဲ /by cre8or
391 နိုင်ငံများအသင်းထံမှ 40 ကျောင်းဆင်း MSCS ဘွဲ့ချီးမြှင့်
အဆိုပါ 2018-2019 mum ကျောင်းဆင်းပွဲလေ့ကျင့်ခန်းမှာစံချိန်တင် 391 ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်SM 40 လူအမျိုးမျိုးထံမှကျောင်းသားများအတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီဂရီ၌မိမိတို့က MS ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဘွဲ့ရ MSCS ကျောင်းသားများကိုထိုလူမျိုးကလာ:
အာဖဂန်နစ္စတန်, အဇာဘိုင်ဂျန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘူတန်, ဘရာဇီး, Burkina Faso, မြန်မာ, ကမ္ဘောဒီးယား, ကနေဒါ, ချီလီ, တရုတ်, ကိုလံဘီယာ, အီဂျစ်, အီရီထရီးယား, အီသီယိုးပီး, ဂါနာ, အိန္ဒိယ, အင်ဒိုနီးရှား, အီရန်, အီတလီ, ယော်ဒန်မြစ်, မလေးရှား, Mauritania, မွန်ဂိုလီးယား, မော်ရိုကို , နီပေါ, ပါကစ္စတန်, ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကို, ပီရူး, ဖိလစ်ပိုင်, သီရိလင်္ကာ, Tajikistan, တန်ဇန်းနီးယား, တူနီးရှား, တူရကီ, ယူဂန်ဒါ, အမေရိကန်, ဥဇဘက်, ဗင်နီဇွဲလား, နှင့်ဗီယက်နမ်တို့။ မြင် ကျောင်းဆင်းပွဲဓာတ်ပုံများ.
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒင်း Keith လေဝိ, ဖြည့်စွက် ဒီအဓိကအောင်မြင်မှုဘို့ငါတို့ဘွဲ့ရဖို့ "ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောနှင့်စိန်ခေါ်မှုကွန်ပျူတာပညာရှင်များမာစတာဘွဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှု၏တစ်သက်တာအဘို့အသီးအသီးလူတစ်ဦးကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ "
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်စဉ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဦးစီးဌာနပျော်ပွဲစားမှာ, ကျောင်းသားများ, ဝန်ထမ်းများ, ဒြေနှင့်ငါတို့မိသားစု mum ကျောင်းဝင်းအနီးရှိရေကန်မှာအရသာအစားအစာ, ဂိမ်းများ, နှင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကုမ္ပဏီပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာပူပြင်းတဲ့နေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ရေလန်းဆန်းပဲ! ပျော်မွေ့ကျေးဇူးပြုပြီး ပျော်ပွဲစားဓာတ်ပုံများ.
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/eohnmarmyint10.jpg 550 960 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2019-07-12 15:15:342019-11-10 16:59:02mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ကျောင်းဆင်းများ၏စံချိန်အရေအတွက်
အဘယ်အရာကို ComPro ပညာရေးထူးခြားသောကို?
မေလ 14, 2019 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
'' ComPro '' 'Computer ပညာရှင်များအစီအစဉ်' 'အဘို့အတို
ကမ်ဘာပျေါတှငျမဆိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံမာစတာဘွဲ့အစီအစဉ်ကို '' ထူးခြားတဲ့ 'ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါက mum မှာ ComPro အစီအစဉ်ကိုအကောင်းတစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်မယ့် ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ComPro မာစတာရဲ့အစီအစဉ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသင်တန်းများ: အထူးပြုသုံးဒေသများ: အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ, ကို web applications များနှင့်ဗိသုကာပညာ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရ ဒေတာသိပ္ပံ အထူးပြု.
အလုပ်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ: အတွေ့အကြုံရှိကြေးစားန်ထမ်းများနှင့်အတူအောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြင်ဆင်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်အဘို့ဘက်စုံပြင်ဆင်မှု။ ကျွမ်းကျင်မှုများပါဝင်သည်: ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, အလုပ်ရှာဖွေမှု, အင်တာဗျူးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်, အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှု, လစာစာချုပ်အကဲဖြတ်, etc
နည်းပညာဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းပေးခြင်း ထိပ်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပညာပေးနှင့်အတူ: ဒီသင်တန်းကိုမန်နေဂျာအဖြစ်နှင့်လူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုအဖြစ်ဆက်ခံဘို့နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံ-based ချဉ်းကပ်ကမ်းလှမ်း။
အပေါ်အလေးပေး အဆိုပါသင်ယူသူဖွံ့ဖြိုးဆဲ ပညာသင်နှစ်, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအောင်မြင်မှုအဘို့။ ရာနှင့်ချီ၏ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေ ကျောင်းသားများကိုတိုးမြှင့်ထောက်လှမ်းရေး, တိုးတက်လာသောမှတ်ဉာဏ်, ကျယ်ပြန့်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစားသည်ဟုအတည်ပြုရန်, သူတို့ Transcendental Meditation® technique ကိုကျင့်သုံးသည့်အခါစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တိုးတက်လာသောအဆင့်လျှော့ချ, တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ TM အလိုအလျောက်အလုပ်ရှင်များအားဖြင့်ကျောင်းသားများကိုပိုကောင်းအဆိုတော်နှင့်ခေါင်းဆောင်များပိုမိုလက်ခံနှင့်ထို့ထက် ပို. နှစ်လိုဖွယ်စေသည်။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က MS ၏အဓိက features တွေကိုဖေါ်ပြခြင်းဇယား:
အခြားအ MSCS အစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့်အကျိုးအမြတ်:
dedicated ComPro အဆင့်လက်ခံရေးအသင်း
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများ (24 လအထိ) တွင် Paid ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Intern များကို
လေးတစ်နှစ်လျှင် entries တွေကို (International), နှင့်အမေရိကန်ကျောင်းသားများအတွက်နှစ်ခု
ကျောင်းသားများဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများပြုစုစောင့်ရှောက်, အတွေ့အကြုံရှိသဖြင့်မိသားစုနှင့်တူကုသနေကြသည်။ ကျနော်တို့မတူကွဲပြားမှုဆင်နွှဲ။
တဦးတည်းသင်တန်းအချိန်ပြည့်လေ့လာဖို့, လတိုင်း။ ဒီထက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားပါ။
လတ်ဆတ်သော, အော်ဂဲနစ်, Non-GMO ထမင်းစားခန်း (အဓိကအားဖြင့်သက်သတ်လွတ်)
2500 ကတည်းက 85 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 1996 + ဘွဲ့ရ
ကျွန်တော်တို့ကို join လာ. ကြည့်
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/eIMG_7712.1crop2_tint.jpg 2547 4038 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2019-05-14 21:15:462019-07-24 16:22:51အဘယ်အရာကို ComPro ပညာရေးထူးခြားသောကို?
1 ၏စာမျက်နှာ 41234
နေထိုင်သည့်နိုင်ငံအဘူဒါဘီအာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါ & ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားAruba (နက်။ )ၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်Azores (ဆိပ်ကမ်း။ )ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘရာဇီးBritish Virgin Islandsဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂိုကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာခရိုအေးရှားကျူးဘားဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံDahomey / ဘီနင်ဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစုဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်Fmr Yug ကိုယ်စားလှယ်မက်ဆီဒိုးနီးယားပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်အန္တာတိကသည်gabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင် SARဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အီရတ်-ဆော်ဒီအာရေဗျကြားနေဇုန်အိုင်ယာလန်ဣသရလေအီတလီအိုင်ဗရီကို့စ်ဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီKorea Dem ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုရီးယား, သမ္မတနိုင်ငံ၏ကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားအာရပ် Jamahiriyလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယားဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမက္ကစီကိုမိုက်ခရိုနီးရှား, ဗဟိုဘဏ် Statမော်လ်ဒိုဗာ, သမ္မတနိုင်ငံမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယ်သာလန်အန်တီနယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းကျွန်းစုပနားမားပနားမားတူးမြောင်းဇုန်ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ကျွန်းများပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုရဝမ်ဒါစိန့်လူစီယာစိန့်မာတင်ဆာမိုအာဆန်မာရီနိုSao Tome & Principeဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကစပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံစိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ် & နေးဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်ဗင်းဆင့် & Grenadineဆူဒန်ဆူရာနမ်ဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားအာရပ်ထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံတိုဂိုTongaထရီနီဒက် & တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီထိုအကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများTuvaluအမေရိကန် Virgin Islandsယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်စီးတီး (သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုကြည့်ပါ)ဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်ဗာဂျင်းကျွန်းစုများ - ဗြိတိသျှအနောက်တိုင်းဆာဟာရအနောက်ပိုင်းဆာမိုအာယီမင်ယူဂိုဆလားဗီးယားဇိုင်ရီဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
ကျွန်မဖတ်ပါနှင့်ရန်သဘောတူခဲ့ကြ MIU MSCS သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းမျဉ်းများ။ သတင်းလွှာတွေမှာစာရင်းသွင်းလိုက်တာနဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းအီးမေးလ်တွေ၊ သတင်းလွှာတွေရဖို့ငါသဘောတူတယ်။
သင်၏အချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ၁၀၀% လုံခြုံစိတ်ချရပြီးမည်သူ့ကိုမျှဝေမျှလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တရုတ်မှ MIU ကျောင်းသားများသည် Fairfield Campus သို့အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကိုပို့သည်မေလ 27, 2020 - 4: 11 ညနေ
2020Hlina Beyene သည် MIU အကြောင်းအားလုံးကိုနှစ်သက်သည်မေလ 6, 2020 - 12: 58 ညနေ
ဘရာဇီး MIU ကျောင်းသားမှပုံဖော်ထားသော COVID-19 အချက်အလက်မတ်လ 31, 2020 - 4: 29 ညနေ
လတ်တလော ComPro ဘွဲ့ရများထံမှမှတ်ချက်များမတ်လ 23, 2020 - 3: 44 ညနေ
ယူဂန်ဒါညီအစ်ကိုငါးယောက်သည် MIU အစီအစဉ်များကိုထောက်ခံသည်ဇန်နဝါရီလ 21, 2020 - 2: 06 ညနေ
MIU ComPro မိသားစုသို့ဝင်ပါဇန်နဝါရီလ 9, 2020 - 11: 04 ညနေ
© မူပိုင်ခွင့် - မဟာရပ်ရှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာဘွဲ့ - ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ